MAITIRO EKUGADZIRISA TUMBLR MIFANANIDZO KWETE KUISA ERROR - NYORO
Maitiro ekugadzirisa Tumblr Mifananidzo Kwete Kuisa Error
Tumblr imwe yemagariro midhiya uye micro-blogging chikuva uko vashandisi vanogona kutumira avo mablog uye zvimwe zvemukati nekugadzira chimiro. Vashandisi vanogona zvakare kupfuura nemifananidzo, mavhidhiyo, uye mablog anotumirwa nevamwe vanhu pachikuva. Tumblr inogona kunge isiri iyo inozivikanwa kwazvo pasocial media chikuva, asi iri kuwana mukurumbira wayo mumusika nevanhu vanopfuura mamirioni mazana mana nemakumi manomwe nemaviri vakanyoreswa vashandisi papuratifomu.
Nehurombo, vashandisi vazhinji vanogunun'una nezvemifananidzo isiri kurodha paTumblr. Zvakanaka, senge chero imwe nhepfenyuro yemagariro, Tumblr zvakare inogona kuve nenyaya dzehunyanzvi kana kukanganisa kunonetsa pano neapo. Muchikamu chino, isu tichataura nezve zvingangodaro zvikonzero kumashure kwezvifananidzo zvisiri kurodha paTumblr uye zvakare kunyora pasi mhinduro dzekugadzirisa Tumblr mifananidzo isiri kurodha kukanganisa.
windows module yekumisikidza yakakwira disk kushandiswa
Zvikonzero zveTumblr kwete kurodha mifananidzo
Maitiro 1: Tarisa Internet Kubatanidza
Maitiro echipiri: Shandisa Imwe Bhurawuza
Maitiro 3: Disable U-Block yekuwedzera
Maitiro 4: Shandisa VPN software
Maitiro 5: Tarisa kana Tumblr Servers ari pasi
Pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kukonzera iko kukanganisa paTumblr uye zvinokutadzisa kubva kurodha mifananidzo. Pazasi pane zvakanyorwa zvimwe zvezvikonzero zvakajairika zveTumblr kwete kurodha mifananidzo.
1. Internet isina kugadzikana. Kana iwe uri kuwana isina kugadzikana internet yekubatanidza paPC yako kana foni, unogona kutarisana nemifananidzo isiri kurodha kukanganisa paTumblr.
2. Seva traffic: Iyo nyaya yemifananidzo isingarongedze inogona kunge iri nekuda kwekuwanda kwetraffic pane server yaTumblr. Kana vashandisi vazhinji vari online zvese panguva imwe chete, iwo maseva anogona kuwandisa.
3. Zvibvumirano pane zvimwe zvirimo: Tumblr inodzivirira zvimwe zvemukati zvisina kukodzera kune vamwe vashandisi. Uyezve, chikuva chinotadzisawo zvimwe zvemukati munyika dzakasiyana kana nyika. Izvi zvinodzivirira zvinogona kukutadzisa kubva kurodha mifananidzo.
Zvina. U-Bvisa AddON: Pane akati wandei ekuwedzera pawebhu webhu iwe yaunogona kuwedzera kudzivirira uye kuvharira kushambadzira pop-ups. U-Block Addon inowanikwa seimwe yekuwedzera-iyo inodzivirira mawebhusaiti kuratidza ma ads uye inogona zvakare kudzivirira mawebhusaiti anokuvadza komputa. Pane mikana yekuti U-Block AddOn inogona kunge ichivhara mifananidzo paTumblr.
Tiri kunyora pasi mashoma maitiro aunogona kuteedzera kugadzirisa iyo mifananidzo isiri kurodha kukanganisa paTumblr.
Chinhu chekutanga chaunofanira kuita usati waenderera neimwe imwe nzira kutarisa yako internet kubatana. Kana iwe uine murombo kana isina kugadzikana internet yekubatanidza, unogona kusangana nematambudziko ekupinda muakaunti yako yeTumblr, ndoda kurega kurodha mifananidzo papuratifomu. Naizvozvo, kugadzirisa Tumblr mifananidzo isingaregi kukanganisa, unogona kufunga kutevedzera matanho ataurwa pazasi:
1. Tanga nekutangazve router yako. Bvisa tambo yemagetsi wobva waivharazve mushure meminiti kana zvakadaro.
2. Mhanya an internet kumhanya bvunzo kutarisa yako internet kumhanya.
3. Chekupedzisira, bata wako wepainternet webasa kana iwe uine yakaderera internet kumhanya.
Vazhinji vashandisi veTumblr vakakwanisa kugadzirisa iyo mifananidzo isiri kurodha kukanganisa nekungochinjira kune imwe browser. Semuenzaniso, kana iwe uri kushandisa Google Chrome, wozogadzirisa nyaya yacho, unogona kuchinjira kumabhurawuza akaita seOpera, Microsoft Edge, kana vamwe.
maapps paWindows 10
Nekudaro, isu tinokurudzira kuchinjira kuOpera sezvo ichipa zvinhu zvikuru uye chiitiko chekukurumidza kubhurawuza. Zvakare, iwe zvakare uchawana inbuilt adblocker, iyo inodzivirira chero kushambadzira pop-ups. Zvakare, Opera inopa yakachengeteka chikuva, uye zvingango gadzirisa iyo Tumblr isiri kurodha mifananidzo kukanganisa.
Uyezve Verenga: Rongedza Tumblr Blogs chete kuvhura muDashboard Mode
Kana iwe ukaisa iyo U-Block yekuwedzera pane yako browser, ungangoda kuidzima nekuti zvinokwanisika kuti iyo yekuwedzera iri kuvharira mimwe mifananidzo paTumblr uye ichikutadzisa iwe kuirodha. Naizvozvo, kugadzirisa Tumblr mifananidzo isingaregedze kukanganisa, iwe unogona kutevedzera nhanho dzataurwa pazasi sekuenderana newebhu browser yako.
Kana iwe uri kushandisa Google Chrome, saka iwe unogona kutevedzera yakapihwa matanho ekuremadza iyo U-Block yekuwedzera.
1. Vhura Google Chrome kana kana iwe uri kutoshandisa bhurawuza, enda kune iyo nyowani tebhu.
2. Zvino, tinya pane iyo matatu akatwasuka madonhwe pakona yepamusoro-kurudyi kwescreen kuti uwane menyu.
3. Fambisa chako cursor pamusoro pe zvimwe zvishandiso sarudzo uye sarudza kuwedzererwa kubva kumenyu.
4. Dzima toggle padhuze ne U-Block kana U-Block mavambo ekuwedzera kuidzima.
5. Chekupedzisira, tangazve webhu bhurawuza uye utarise kana iyo yekukanganisa yekukanganisa mufananidzo paTumblr yagadziriswa.
Matanho acho akafanana nemamwe mabhurawuza, uye iwe unogona kureva zvidzitiro zviri pamusoro.
Kana iwe urikushandisa Microsoft Edge seyako default browser, saka tevera nhanho dzakapihwa dzekudzima iyo U-Block yekuwedzera:
1. Kutanga Microsoft Edge pane yako PC uye tinya pane iyo matatu akatwasuka madonhwe pakona yepamusoro-kurudyi kwescreen kuti uwane menyu.
2. Sarudza Kuwedzeredzwa kubva kumenyu.
3. Tsvaga iyo U-Bvisa kuwedzera uye tinya pane iyo Bvisa sarudzo yekuimisa.
4. Pakupedzisira, tangazve web browser uye famba uchienda Tumblr.
Kana iwe uine Firefox seyako default browser, heino nzira yekudzima iyo U-Block yekuwedzera.
1. Vhura iyo Firefox browser pane yako system.
2. Dzvanya pa mitsara mitatu yakatwasuka kana bhatani remenu kubva kumusoro-kurudyi kona yekona.
3. Zvino, tinya Wedzera on uye sarudza iyo kuwedzeredzwa kana madingindira sarudzo.
4. Dzvanya pa U-Bvisa kuwedzera uye sarudza iyo Disable sarudzo.
5. Chekupedzisira, tangazve kubhurawuza uye tarisa kana dambudziko ragadziriswa.
Uyezve Verenga: Nzira 10 dzekugadzirisa Zvishoma Peji Kurodha MuGoogle Chrome
Kana iwe uchiri kutadza kugadzirisa Tumblr mifananidzo isiri kurodha kukanganisa, ipapo zvinokwanisika kuti Tumblr iri kukutadzisa kuwana mimwe mifananidzo nekuda kwezvirambidzo munyika yako. Zvisinei, kushandisa VPN software kunogona kubatsira kukanganisa nzvimbo yako uye kuwana Tumblr kubva kune imwe nyika server. Software yeVPN inogona kukubatsira zviri nyore kupfuura zvinodzorwa neTumblr munyika yako kana mudunhu.
windows 10 microsoft micheto isipo
Usati waisa VPN software, ita shuwa kuti yakavimbika uye inouya neyakaganhurirwa bandwidth. Tinokurudzira zvinotevera VPN software.
Kana iwe usingakwanise kurodha mifananidzo paTumblr, saka zvinokwanisika kuti maseva akaremerwa sehuwandu hukuru hwevashandisi vari kushandisa chikuva panguva imwe chete. Kuti utarise kana maTumblr maseva ari pasi, unogona kushandisa server mamiriro nekufamba uchienda Pasi detector , chinova chishandiso chekutarisa mamiriro evhavha. Nekudaro, kana sevha iri pasi, saka haugone kunyatsoita chero chinhu ku gadzirisa Tumblr isiri kurodha mifananidzo asi kumirira kusvikira maseva amuka zvakare.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo (FAQ)
Q1. Nei mifananidzo isiri kurodha pamawebhusaiti?
Kana iwe usingaone chero mifananidzo kana usingakwanise kuidzora pawebhusaiti, saka kazhinji, dambudziko riri kumagumo ako uye kwete peji rewebhu. Tarisa yako yekubatanidza internet usati wawana webhusaiti. Dambudziko rinogona zvakare kusimuka nekuda kwekukanganisa kumisikidzwa kwema browser mabhurawuza. Naizvozvo, ita shuwa kuti iwe unogadzirisa mushe mabhurawuza nekufamba nenzira yeWebhu browser menyu. Chekupedzisira, ita shuwa kuti unodzima chero kushambadzira kwekuwedzera kubva kubhurawuza sezvo vangave vari kuvharira mifananidzo pawebhusaiti.
Q2. Nei Tumblr isiri kushanda paChannel?
Tumblr inogona kusangana nezvikanganiso zvinotyisa nguva nenguva. Kugadzirisa Tumblr isiri kushanda paChannel, unogona kutangazve bhurawuza uyezve kupinda muakaunti yako. Chimwe chinhu chaunogona kuita kujekesa cache mafaira eTumblr. Dzima kushambadzira kwekuvharira ekuwedzera kubva kuGoogle browser. Chekupedzisira, shandisa VPN kukanganisa nzvimbo yako uye kuwana Tumblr kubva kune yekune server.
Saka, idzi dzaive dzimwe nzira dzaungayedza gadzirisa Tumblr mifananidzo isiri kurodha zvikanganiso . Isu tinovimba mutungamiriri wedu anga achibatsira, uye iwe wakakwanisa kugadzirisa nyaya paTumblr. Kana iwe uine chero mibvunzo maererano nechinyorwa ichi, inzwa wakasununguka kuzvikanda muchikamu chekutaura.
zvirongwa zvinovharwa nekukurumidza mushure mekuvhura
windows 10 chishandiso chako chinoda matsva ekuchengetedza matsva
windows 10 yakakosha kukanganisa kutanga menyu isn t kushanda
maitiro ekudzima windows windows mu windows 10 imba
nzira yekudzima yakamirira inogadziridza windows 10
kudhindisa kuwana kwakarambidzwa kutadza kubatanidza windows 10